Windows ayikwazi ukuxhuma isevisi. Kanjani ukukulungisa
Ngokuvamile, yebo, kodwa ngezinye izikhathi abasebenzisi zekhompyutha esekelwe Windows ibhekene esimweni esingajabulisi. Uhlelo ibika ukuthi i-Windows ayikwazi ukuxhuma isevisi esinecala inqubo. Cabanga ezahlukeneyo ezivame kakhulu amaphutha bese ohambelana izindlela zabo ukulungiswa.
Windows ayikwazi ukuxhuma isevisi: isimo kungenzeka
Kukholakala ukuthi phakathi kwawo wonke amaphutha ezenzeka ukwehluleka eziphawuleka kakhulu ukulungiswa, yibo ezimbili eziyinhloko: ukungakwazi ukuqala inkonzo kusistimu izenzakalo isaziso (igama lesibili - SENS) kanye izingxenye system obhekene ukufakwa kwe-software uhlelo kwanoma yiluphi uhlobo. Akunzima ukuqagela ukuthi esimweni sesibili ke iyisevisi we isifaki se-Windows, nakuba njengoba isifaki Kungasetshenziswa hhayi kuphela le ngxenye, kodwa futhi ezinye izinhlobo ze.
Esikhathini isimo kuqala, inkinga wukuthi ingxenye ukukhubaza uhlelo isaziso nje kukhawulela amalungelo yomsebenzisi, okuyinto akezi ngaphansi i-akhawunti nomqondisi. Lena ngokulinganayo kweqiniso ka lapho umuntu enezinkinga ezihambisana yokuthi isevisi "Isifaki Windows» ekhubazekile. Ngakho, isiphetho elula: lezi zingxenye kufanele zibe ku-noma iqalisiwe.
Indlela elula sokulungisa ukwehluleka
Ngakho, sibheke isimo elula. Uma umsebenzisi uyazi kahle ngasiphi qophelo iphutha (ngaphambi wasebenza emihle), ungazama nje ukubuyisela ohlelweni. Qaphela manje asikhulumi ngezizathu ukuthi imbangela yokungaphumeleli noma shintsha izilungiselelo ngenxa yokuchayeka igciwane. Ihlola khona izinsongo akuyona indaba edingidwayo. Umsebenzisi kufanele aqonde ukuthi kubaluleke kakhulu mayelana nokuphepha.
Ukubuyela emuva ohlelweni kufanele ufake "yokutakula isipele isikhungo" lapho zisebenzisa esigabeni ezifanele. Kulokhu, uma inkomba iphuzu ohlwini ethulwa, udinga ukwandisa uhlu ngokubonisa umugqa amaphuzu etholakalayo (ukusebenzisa elinye iphuzu buyisela emuva). Ukukhetha isikhathi ngaphambi ukuvela umyalezo lokuqala Windows abakwazi ukuxhuma kwi-SENS noma Isifaki, futhi Rolls emuva ohlelweni (qala kabusha kuzokwenzeka ngokuzenzakalela).
Xazulula izinkinga isaziso inkonzo uhlelo imicimbi
Le nkinga cishe ezivamile. Khubaza i-Windows inkonzo, ukushintsha uqalisa yabo nomai izilungiselelo babengaphumeleli njalo amagciwane, nezinhlelo ezithile efakwe ohlelweni. Sicabanga ukuthi igciwane likhona, futhi yokutakula ehluleka.
Ukuxazulula le nkinga kuyodingeka wenze kanzima kabusha amanye amasethingi yezingxenye uhlelo, okuyinto kudingeka ukugijima ngokushesha umyalo wokuba umphathi. Lokhu kwenziwa ngokuthayipha cmd ku-console "Run", ucingo esheshayo yenziwa ngokusebenzisa Win R. okhiye kufanele ebekwe emgqeni kokulalela umyalo:
netsh isiqondisi kabusha.
okungenhla imiyalo emibili asetshenziselwa ukwethembeka, kodwa ezimweni eziningi ungafaka kuphela wesibili. Ngemva nokucupha imiyalo uqalise kabusha.
Izinkinga isevisi unhlangothintathu
Nge isifaki, isimo Kuthi kuyinkimbinkimbi nakakhulu. Kungabakhona zimo ezimbili: kuphakathi kokuthi umsebenzisi akanawo amalungelo umlawuli, noma isevisi nje zikhutshaziwe.
Ukuze isimo kuqala, ikhambi elinengqondo kakhulu kungaba ukuba ungene nge-umlawuli we-akhawunti noma nabelane amalungelo wokuqondisa we-akhawunti wamanje. Nokho, lesi sisombululo zingase zingasebenzi, futhi isistimu ngikutshele ukuthi Windows hhayi Ungaxhuma isifaki. Ithi kuphela ukuthi ingxenye ngokwawo esimweni sokungasebenzi.
Manje ake sibone ukuthi ukusebenzisa isevisi unhlangothintathu (isinqumo osebenza kuwo wonke amasevisi, kanye nezinkinga nge isimo zabo ezikhubazekile). Kulokhu, nakuba, futhi umbuzo isakhi esithile, ukuqonda ngale ndaba kungaba wusizo ngokuzayo ukulungiswa yamanye amaphutha.
Ukufinyelela kulezi zingxenye, esigabeni ukulawula ingatholakala kwimenyu "Run" isivele phezu services.msc console umyalo. Futhi ufaka kulesi sigaba kungenzeka ngokusebenzisa imenyu ikhompyutha.
Ngemva kokungena sibheke ohlangothini lwesokunene umhleli, lapho amasevisi endawo-Windows zitholakala. Lapha udinga ukuthola umugqa igama ingxenye oyifunayo (kuleli cala, i-Windows isifaki) bese nibheka wadalula uqalisa hlobo. Inani kumele isethwe uhlobo mathupha. Uma-ke ihlukile (ngokuvamile efakwe uhlobo okuzenzakalelayo), chofoza kabili-kubangela iwindi izilungiselelo ezengeziwe. Ithebhu ohambelana we uhlu olwehlayo, ukhethe inani wayefisa ngalesosikhathi gcina izinguquko. Ngomqondo onabile, inkulumo ifoni ukuqalisa phansi ezimweni eziningi akudingekile, kodwa nje ukuqiniseka ukwenza ukuqalisa phansi ngokugcwele kangcono, bese sibona ukuthi le ndlela baziphathe.
Omunye angase azame ngisho ukwenza ushintsho olufana izilungiselelo kumbhalisi, okuyinto, ngokuvamile, ke okuphindiwe imingcele esungulwe kulesi sigaba. Nokho, le ndlela kuyinto zabasebenzi nokusebenza kakhulu futhi kuthatha isikhathi, futhi ukungabi khona ulwazi olukhethekile ngaphandle kwesidingo ebhukwini kungcono hhayi ukukhuphuka.
Iphutha ukulungiswa usebenzisa amathuluzi ezenzakalelayo
Ekugcineni, uma amasu okuxazulula inkinga ngenhla azisebenzi, nakho kwenzeka kaningi impela, futhi phawula ukuthi i-Windows ayikwazi ukuxhuma le ngakho-bani, livela kaningi, ungasebenzisa izindlela ezenzakalelayo ukulungisa isimo, ezihlongozwayo download bese ukufaka onamakhasi Microsoft ukwesekwa.
Kulokhu, it is a hlelo encane okuthiwa u-Microsoft Fix It. Enye indlela ukuxazulula le nkinga kungaba thwebula kusukela efanayo ukufakwa isisetshenziswa isifaki ukusatshalaliswa nokuhlanganisa okwalandela ohlelweni. Nokho, kumelwe ukukhiqiza kuphela umlawuli, mhlawumbe umugqa wemiyalo.
Ekugcineni-ke Kuyaphawuleka ukuthi ababili kuphela evame kakhulu ihlangabezane ezibhekwa isimo futhi izindlela eziyisisekelo kakhulu yokuqeda izinkinga. Kwezinye izimo, usebenzisa umugqa wemiyalo ukusetha kabusha amapharamitha asetshenziswayo imiyalo kungaba okuningi, futhi ngemva kokusebenza aso kuyodingeka fundisisa izilungiselelo zenethiwekhi. isixazululo enjalo engakaze kubhekwe kuphela ngenxa yokuthi kunzima kakhulu, futhi abantu abaningi bamane nje aluphumelelanga. Endabeni elula, ithimba eyodwa kuphela, esiphezulu - amabili. Ngaphezu kwalokho, kwaba Kusengenzeka ukuhlola ubuqotho izingxenye system nge umyalo SFC / scannow, kodwa, njengoba umkhuba imibukiso, lapho isetshenziswa, ngomqondo ongokomfanekiso, uma kwenzeka nje.
By the way, ngasizathu simbe, ngokusho izibalo izinkinga ezinjalo ngokuvamile avele nguqulo ye-Windows Vista, osuvele wagxeka ngenxa yokuthi kuba ngisho ne izibuyekezo olufakiwe namanje sidle futhi "eluhlaza".
Edinga amagajethi i-Windows XP
Indlela ukungena ubunjiniyela imenyu ifoni?
A ewusizo uhlelo buyisela emuva
Izindlela eziningana ukuze uthumele oxhumana nabo kusuka Android ku-Android
Izimonyo kwabesifazane abakhulelwe: ukubuyekezwa abathengi kanye nochwepheshe
Uyaxebuka sezinwele. Izimbangela Nezingozi izixazululo
White Nights: Magic Studies 'Venice Yezilwandle North "
Ihhotela e-Andaman Sea umbono Ihhotela 4 *, Phuket, Thailand: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Yini ukubona e Kazan izinsuku 2: nokuzwa incazelo, umlando kanye nokubuyekeza
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo "Navington Caravella": incazelo, izici, izincazelo kanye nokubuyekezwa